South Korea bụrụ onye ahịa nke atọ kachasị na Asia na Pacific na 2025
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ South Korea na -agbasa » South Korea bụrụ onye ahịa nke atọ kachasị na Asia na Pacific na 2025
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • Akụkọ okomoko • News • Iwughachi • Resorts • Ịrụ ọrụ • Akụkọ South Korea na -agbasa • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Nnukwu ibu ọrụ na nrụgide sitere n'aka ndị isi emeela ka ndị South Korea ghara ime ndị ezumike n'oge gara aga, n'amaghị ama na-emetụta ma njem ụlọ ma nke mba.
Ọpụpụ mba ụwa si South Korea nọ na-eto nwayọ tupu COVID-19.
Ọrịa na-efe efe COVID-19 na 2020 hụrụ ọkwa ọkwa nke njem ụlọ na nke ọpụpụ belatara nke ukwuu.
Ihe karịrị 80% nke njem si na South Korea na-elekwasị anya na mpaghara APAC.
Achọpụtaghị njem njem si na South Korea gafere ọkwa tupu ọrịa a eruo ruo 2024, mgbe a na-eche atụmatụ ịpụ na 29.6 nde. Agbanyeghị, a na-ebu amụma South Korea otu n'ime oge uto kachasị elu site na 2020-2025 na mpaghara Asia-Pacific (APAC), yana mmụba uto kwa afọ (CAGR) nke 40% na nde 30.2 na-apụ apụ na 2025. Nke a ga - eme South Korea ahịa nke atọ kachasị na mpaghara APAC na-aga n'ihu.
Akuko ulo oru ohuru, 'Ihe omuma ahia nke njem nleta: South Korea (2021)', choputara na opupu mba ofesi na South Korea na eto eto tutu oge COVID-19 (CAGR 2016-19: 8.7%). Itinye aka na ahịa nke a site na mgbasa ozi mmekọrịta na teknụzụ nwere ike ịba uru dị ukwuu na gburugburu ebe ọrịa na-efe efe.
Nnukwu ibu ọrụ na nrụgide sitere n'aka ndị isi emeela ka ndị South Korea ghara ime ndị ezumike n'oge gara aga, n'amaghị ama na-emetụta ma njem ụlọ ma nke mba. Ebumnuche gọọmentị iji kpalie oge ezumike na ibelata oge ọrụ na 2018, agbanyeghị nwere mmetụta ma hụ mmụba kwa afọ na ụlọ (YoY + 44.7%) na njem mba ụwa (YoY + 8.3%).
Ọrịa COVID-19 na-efe efe na 2020 na-ahụkarị ọkwa nke ụlọ (YoY -70.6%) na ọpụpụ (YoY -80.6%) njem na-ada nke ukwuu. Agbanyeghị, ndị na-emefu ego dị elu mgbe ha na-eme njem na nnukwu ọchịchọ maka ahụmịhe njem ndị ọzọ, pụtara na South Korea nwere ike ịbụ ohere ahịa ahịa maka ụzọ dị iche iche na gburugburu ọrịa na-efe efe.
Ihe karịrị 80% nke njem si na South Korea na-elekwasị anya na mpaghara APAC, nke dị nso na ịdị mfe nke njem. US bụkwa ebe mbụ maka ahịa isi iyi. O yikarịrị ka nke a bụ ihe dịka ohere maka anyanwụ na ụsọ osimiri, oge ezumike obodo na ahụmịhe gastronomical, bụ ndị a kọwara dịka atọ kachasị ezumike kachasị na 2019, dị ka nnyocha ndị ahịa na-adịbeghị anya.
Nkà na ụzụ na-ekerekwa òkè na mmasị njem dị ka 71% nke ndị zaghachiri South Korea nke akpọrọ 'mgbe niile', 'mgbe mgbe' na 'dịtụ' na-emetụta 'otu esi arụ ọrụ digitally / smart a ngwaahịa / ọrụ' na nyocha Q1 2021. Otu nnyocha ahụ gosikwara na 51% na-etinye oge dị ukwuu n'ịntanetị n'ozuzu ha; nke a dị elu karịa mba ọ bụla ọzọ enyochare (mba niile nyochara: 42), na-atụ aro ịdabere na teknụzụ abawanyela n'oge ọrịa COVID-19.
Ohere iji dọta ndị njem nleta South Korea na-esonye na ntinye nke teknụzụ na ahụmịhe ndị njem. Mgbasa mgbasa ozi, itinye aka na ngwa na ọrụ ntụgharị ga-eme ka ahụmịhe ndị ọbịa dị elu.